China Indlela ukuqinisekisa ukusebenza uphawu engagqwali ibhola valve Ukwakha futhi Factory | Shineway
Ukuqinisekisa ukusebenza kokufakwa uphawu kwe-valve yensimbi engagqwali lapho ingcindezi yokusebenza ephakathi iphansi, kufanele kwakhiwe ingcindezi ethile yangaphambi kokuqina phakathi kwebhola nesihlalo sokubekwa uphawu. Esihlalweni sokuqina sokuqina, ukuthembeka nempilo yesevisi ye-valve yensimbi engagqwali iboshwe ekukhetheni okulungile kwenani langaphambi kokuqina kwesihlalo sokubekwa uphawu.
Ukuthembeka nokusebenza kwempilo ye-valve yensimbi engagqwali; bamba inani langaphambi kokuqina lokukhethwa okulungile kwesihlalo sokubekwa uphawu. Ukuntuleka kokuqiniswa kwangaphambilini akukwazi ukuqinisekisa ukuqina kwengcindezi ephansi ye-valve yebhola: ukuqina okukhulu kwangaphambi kokuqina kuzobangela ukuthi i-torque ephikisanayo phakathi kwebhola nesihlalo sokubekwa uphawu inyuke, kuthinte umsebenzi wesenzo se-valve yensimbi engenasici; futhi kungadala ukuguqulwa kwepulasitiki kwesihlalo sokubekwa uphawu, okuholele ekwehlulekeni kokuvala. Mayelana nesihlalo sokubeka uphawu se-PTFE, ingcindezi ethile yokulayisha kuqala kufanele ibe yi-0.1 PN futhi ingabi ngaphansi kwe-1.02 MPa.
Ukulungiswa kwenani lokuqinisa ngaphambili kwesihlalo sokuqina sokuqina kuqedwa ngokushintsha ubukhulu be-gasket yokulungisa ukubekwa uphawu. Iphutha lokucubungula i-gasket yokulungisa uphawu lizothinta umphumela wokulungiswa: imishini enengqondo nokulungiswa kuyisihluthulelo sokuthola ukusebenza okuhle kakhulu kokufakwa uphawu. Iyasebenza, ngemuva kokuthi isihlalo sesembozo sesigqokiwe, amandla okulungisa asebenzayo we-preload ingcindezi ethile ayimbi kakhulu, ngakho-ke impilo yensizakalo yebhande le-valve yesihlalo esiqinile yesakhiwo ifushane.
Enye yezindlela zokubhekana nale nkinga ukukhetha isihlalo sokubekwa uphawu ngezinto ezinwebeka. Ngalesi sikhathi, ukutholwa nokulungiswa kwenani lokuqina langaphambi kwesikhathi akusanciki egalikeni lokulungisa ukubekwa uphawu kepha kuqedwa ngento enwebeka. Ngaphezu kokuthola inani elidingekayo langaphambi kokuqina, isihlalo sokubekwa uphawu ngezinto ezinwebeka singanxephezela ingcindezi ethile yangaphambi kokuqina ngaphakathi kwebanga lokunwebeka le-elastic. Ngakho-ke, impilo yenkonzo ye-valve yebhola yinde kakhulu.
Ukhiye wokufakwa uphawu kwamavalvu ebhola lensimbi engagqwali ulele ekwakhiweni kwesihlalo sokubekwa uphawu kanye nokukhethwa kwempahla yesihlalo sokuvala. Ngokuya ngezidingo ezihlukile zesakhiwo nezicelo, khetha ngokuhle indlela yokwakheka kwesihlalo sokubeka uphawu ukuqinisekisa ubuchwepheshe bokucubungula obuhle besihlalo sokubekwa uphawu: khetha okokufaka uphawu ngomsebenzi omuhle kakhulu nezidingo zesicelo esijwayelekile ukuze uhlangabezane nezidingo zokubekwa uphawu kwe-valve yebhola nokuthuthuka ukwethembeka nokusetshenziswa komsebenzi webhola le-valve Isikhathi sokuphila sibalulekile ekuhlelweni kokulungiswa kwebhola.
Isikhathi Iposi: Nov-10-2020